Ukuphazamisa isifo, noma ukuphindaphindiwe kwayo, kuyisimo esingajwayelekile esingenalutho, okubalwa ngaphansi kwezingu-1% kuzo zonke izinkinga zokuthuthukiswa kwalesi sigameko. Ukuziphindaphinda kweqiniso kuyi-formomic acid eyenziwe eduze kwe-ecopus, ehlanganiswe nekhanda elifanayo lemisipha elinomumo ofanayo we-mucosal. Yenza ingxenye yesithathu yezimpendulo. Bonke abanye banezambatho zangaphakathi ze-membrane yamangqamuzana kwezinye izingxenye zomuthi wamathumbu.
Kunezinhlobo ezine zokuphinda kabili: i-cystic, i-diverticular, i-tubular ne-segmental-intramural. Impahla evamile yazo zonke izimpendulo ukuxhumana kwabo abaseduze ne-esophagus nokuntuleka kokuxhumana nayo.
Ukuguqulwa kwama-cystic kuhlukile ngobukhulu, izinga lokuhlelwa kwe-mediastinum kanye nokuba khona kwe-mucosa odongeni lwangaphakathi. Ifomu alihambisani nesisindo, ububanzi buhluka kusuka ku-5 kuya ku-10 cm. Indawo yakhiwe ikakhulukazi phezulu nangaphakathi kwesithathu kwe-oophagus.
Ukukhula kwama-cystic okuphindaphindiwe kwesigodlo sokunene kwesibindi kwenzeka izikhathi ezingu-2,5 kaningi kunokwesobunxele. Ukukhulumisana phakathi kwesigcawu sokuphindaphinda nokukhanyiswa kwesiguli noma i-bronchus kuyinto engavamile kakhulu futhi kwenzeka enkambeni yokuphindaphinda ukukhula njengengcindezi yalolu daba. I-membrane yamangqamuzana ehlanganisa ukukhanya kwangaphakathi kokuphindaphinda kufana nokuhlelwa kwesibonda sesisu (45.4%) noma isisindo (35.7%).
Ukubonakaliswa okubalulekile kwemitholampilo sekuvele kuqakathekile emnyakeni wokuqala wokuphila kwengane. Zibangelwa ngokuyinhloko ngokuphulwa kobuciko, ukucindezelwa kwe-trachea kanye ne-oophagus. Cishe ingxenye yengane inezibonakaliso ezihambisana nezinqubo ezenzeka ku-cyst ngokwayo, isibonelo, ukuhlukaniswa kwe-capsule kubangela ukuzwa okubuhlungu, ukuqoqwa kokuqukethwe nokumuncwa ngendwangu yayo yomswakama kubangela ukubonakala komkhuhlane. Kwezinye izimo, ukuphuma kwegazi kwenzeka. Ngezinye izikhathi, ukuphindaphinda kabili kwe-cystic ye-esophagus kugeleza kalula futhi kutholakala ngengozi nge-prophylactic ukuhlolwa kwe-X-ray.
Naphezu kokunamathela kakhudlwana kwama-cysts odongeni lwesigcawu, ukubonakaliswa kwemitholampilo yokucindezela kwe-trachea ne-bronchi kubonakala ekuqaleni, okungenzeka kuxhunyaniswe nokufuduka okukhulu kwe-esophagus. Izimpawu zokucindezela zikhwehlela, umzwelo wokudabuka ekuphefumuleni. Esikhathini esizayo, ukuthuthukisa ukuphazamiseka kokuphefumula, okuchazwe ngendlela yesigcawu, ukuvinjelwa okuyingxenye yendlela yokuphefumula. Okokugcina, ekugcineni, kuholela ekuthuthukiseni i-pneumonia enamandla noma engapheli, i-atelectasis ne-bronchiectasis.
Izimpawu zakamuva zokucindezelwa kwe-esophagus zibonakala ku-vytesrygivaniya, ukuhlanza kanye ne-dysphagia. Lezi zimpawu zinomphela, kanti ngesikhathi esisodwa ukuphazamiseka kokuphefumula kwenzeka njengokwehluleka. Ukuphindaphinda nokuhlanza ngokushesha ngemva kokugwinya. Emanzini okuhlanza nokuhlanza kuqukethe ukudla okungashintshi.
Ukukhipha amanzi kungabangela ukuhlukunyezwa kwe-cystic kabili-ukwephulwa kwe-cyst ku-esopha noma ekuphefumuleni. Kulezi zimo, ukuhlanganiswa kwegazi kutholakala ku-sputum noma ku-regruited food gruel. Lapho i-cysts yokuphuma kwegazi ifihlekile (imimoya).
Ukuguqulwa kwama-cystic kuhlangene nokukhubazeka kwezintuthuko kwezinye izitho, ikakhulukazi nge-anomalies ekuthuthukiseni ama-vertebrae nezimbambo.
Njengoba azikho izimpawu zomtholampilo zokuphindaphindiwe kwe-cystic ye-esophagus, indlela ye-X-ray isetshenziselwa ukuyihlolisisa. Ngosizo lwale ndlela, ukuphindaphinda kabili kwe-cystic ye-esophagus kwembula ama-rounded formations e-mediastinum yangemuva, ngokuvamile ihlangene nokuguquguquka kokuzalwa kwama-vertebrae nezimbambo. Kodwa-ke, ukwakheka okuzungezile kumele kuhlukaniswe kusuka ezihlakalweni ezingenayo i-neurogenic, ama-cysts e-bronchogenic ne-dermoid, nama-abscesses. Ukuhlolwa kwe-X-ray, kanye nokwedlule, akuvumeli ukutholakala ngokucacile kokuphindaphindiwe kwe-cystic ye-esophagus, ngoba izimpawu zokucindezela nokufuduka kwezakhiwo zifakazela ukuthi kukhona imfundo yokuziphendulela, kodwa hhayi imvelo yayo.
Akufundisi ngokwanele ukuhlolwa kwe-endoscopic ye-esophagus kanye nesihlahla sama-bronchial.
I-cyst puncture ibonakala iyingozi kakhulu, ngoba, ngaphandle kokushintsha noma yini ngokuphathelene nomkhuba wezokwelapha, kudala ingozi yokuthelela i-mediastinum tanni emnene.
Indlela kuphela yokwelashwa kokuphindaphindiwe kwe-cystic ye-esophagus iyasebenza (ukususwa kwe-cyst). Imiphumela yokwelapha ukwelashwa iyanelisa kakhulu.
Ngokuqondene nezinye izinhlobo ze-esophagus kabili, ziyizinto ezingavamile kakhulu futhi azibalulekile.
Ukugoma ngokumelene ne-tetanus, i-diphtheria, ukukhwehlela okukhwehlela
Ukuphulukisa ingane nokuphulukisa ukukhwehlela
Indlela yokuchaza ingane ukuthi utshwala nokubhema kuyingozi
Ngidinga ukwenza imithi yokuvimbela izingane?
Umphumela wokugcoba umzimba womntwana
Yimaphi amathoyizi adingekayo enganeni?
Wedding in the style of "Moulin Rouge"
Indlela yokuthola indlela kumfana?
Kanjani kahle ukugcizelela isiqhwa?
Isibalo esincane emva kwezinsuku ezingamashumi amathathu ngaphandle kokudla: izimiso zokudla okunomsoco kanye neresiphi yekhekhe le-cheese e-Chulpan Khamatova
Isitshalo se-veal esishisayo
Inkukhu fillet nge pasta kanye bell pepper